Epistily ho an'ny Filipiana - Wikipedia
Epistily ho an'ny Filipiana
Ny Epistily ho an' ny Filipiana na Taratasin' i Masindahy Paoly ho an'ny Filipianina dia boky hita ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ny atao hoe epistily. Taratasy nalefan'ny Apostoly Paoly ho an'ny fiangonana tany Filipy izany. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 60 sy 65 no nanoratana azy. Misy toko 4 ity boky ity.
Nilaza ny vaovao momba ny tenany sady nampahery ireo Kristiana filipiana mba ho vonona amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Mamporisika ny Kristiana mba hiombona ho iray i Paoly, ka ahatsapana ny fisian'ny olana maro tao amin'io fiangonana io izany. Ahatsapana ny fihetseham-po feno fitiavana ao amin'i Paoly ity epistily ity. Miveriberina ny lohahevitra ny amin'ny hafaliana, ka vavolombelona anambaràny ny fandresen'ny finoana manoloana ny fahasahiranana izany.
2 Fotoana sy toerana nanoratana ny epistily
4.1 Mitory ny Filazantsara i Paoly
4.2 Ny amin'ny mpanohotra sy ny mpomba ny hazo fijaliana
Επιστολή προς Φιλιππησίους / Epistolê pros Philippêsious no fiantsoana azy amin'ny teny grika fa Epistula ad Philippenses kosa amin'ny teny latina.
Ny Protestanta malagasy sy ny ankamaroan'ny Kristiana malagasy tsy katolika dia manao hoe Epistily ho an'ny Filipiana (hafohezina amin'y hoe Filipiana) fa ny Katolika malagasy kosa manao azy hoe Epistolà na Taratasin'i Masindahy Paoly ho an'ny Filipianina (hafohezina amin'ny hoe Filipianina).
Fotoana sy toerana nanoratana ny epistilyHanova
Tamin'ny nanoratan'i Paoly ity taratasy ity dia tany am-ponja izy (Fil. 1.7), tany Efeso (na Efesosy na Efezy) izany hoy ny mpandinika sasany, fa tany Kaisarea (na Kaisaria na Sezarea) kosa izany hoy ny hafa, na koa tany Roma (ity angamba noi marimarina kokoa) izay naha mpifatotra afaka azy, araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apostoly (Asa 28), nefa manantena fa ho afaka izy mba hahafahany mandray anjara amin'ny fandrosoana sy ny hafaliana ao amin'ny finoanan'ireo Kristiana ao amin'ny tanànan'i Filipy (Fil. 1.25). Tokony ho teo anelanelan'ny taona 60 sy 65 no nanoratana azy.
Ny Makedoniana (na Masedoniana) tsy Jiosy amin'ny ankamaroany no nandefasan'i Paoly io taratasy io, izay mpino ao amin'ny fiangonana naoron'i Paoly tamin'ny diam-pamitana iraka (misiona) faharoa nataony. Nanam-pifandraisana lalina tamin'ny mpanorina azy ilay fiangonana: nandefa fanomezana ho an'i Paoly matetika ny fiangonana.
Nosoratan'i Paoly tao am-pigadrana ity taratasy ity (Filip. 1.7) mba hisaorany ireo Kristiana izay nanampy azy tamin'ny fanomezana sy ny vavaka (Filip. 1.5; 4.10-19). Mirary ny ho afaka izy mba hahafahany mitory indray ny vaovao mahafaly (Filip. 3.17-19) nefa fantany fa tsy maintsy ho faty izy (Filip. 1.21; 2.17; 3.10).
Mampiomana ny Kristiana ao Filipy i Paoly fa tsy maintsy hijaly tahaka an'i Jesosy Kristy izy ireo ary i Paoly tenany dia efa mijaly rahateo. Raha izany tokoa no mitranga dia tokony ho heverin'ny Kristiana filipiana ho fitahiana avy amin'ny finoany an'i Kristy izany (Filip. 1.28-30).
Misy olana ao amin'ny fiangonana ao Filipy satria misy olona sasany izay milaza fa tokony hotoavina ny Lalàn'i Mosesy raha te ho voavonjy. Nampitandrina ny fiangonana ny amin'izany i Paoly (Filip. 3.2-11).
Na dia tao an-tranomaizina aza i Paoly dia feno fifaliana satria nahita ny fiovan'ny Kristiana avy amin'ny toetra ratsy ho amin'ny tsara ary satria naneho hatsaram-panahy taminy ny mpino ao Filipy.
Ampahatsiahivin'i Paoly azy ireo fa ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony hiaina am-pilaminana (Filip. 2.2; 4.2-3) sy tokony hanana fisainana mitovy amin'ny an'i Jesosy Kristy (Filip. 2.6-7).
Azo zaraina roa ny Taratasin'i Paoly hoan'ny Filipiana:
- Mitory ny Filazantsara i Paoly (Filip 1 - 2)
- Ny amin'ny mpanohotra sy ny mpomba ny hazo fijaliana (Filip 3 - 4)
Mitory ny Filazantsara i PaolyHanova
Teny fiarahabana (1.1-2)
Fiasaorana sy vavaka (1.3-11)
Fifikiran'i Poly amin'ny fitoriana ny Filazantsara (1.12-26)
Ny tokony hananana fitondran-tena mendrika (1.27-30)
Ny tokony hiraisana saina sy fo (2.1-5)
Ny tokony hanahafana ny Tompo (2.6-11)
Tokony hahamendrika ho an'ny Tompo (2.12-16)
Fanirahana an'i Timoty sy fampodiana an'i Epafrodita (2.17-30)
Ny amin'ny mpanohotra sy ny mpomba ny hazo fijalianaHanova
Fampitandremana amin'ny fahavalo (3.1-3)
Miaiky ny finoany i Paoly (3.4-14)
Ny tokony hitomoerana tsara ao amin'ny Tompo (3.15 -- 4.1)
Hafatra fananarana sy filazam-piadanana (4.2-9)
Fisaoran'i Paoly ilay fanomezana avy amin'ny Filipiana (4.10-20)
Teny firarian-tsoa sy famaranana (4.21-23)
↑ Jereo: Asan'ny Apostoly 16.11-40
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_ho_an%27ny_Filipiana&oldid=1038763"
Dernière modification le 12 Oktobra 2021, à 08:54
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 08:54 ity pejy ity.